I-Comunica / Inxaxheba: IiNkonzo zoomasipala - ii-Geofumadas
Ukuthetha / Ukuthatha inxaxheba: IiNkonzo zoomasipala
NgoJanuwari, 2011 Google umhlaba / imephu, ezintsha
Kungekudala I-Tuent bhengeze le nkonzo entsha, iCommunic @, eyongezelelweyo kwiNxaxheba @ ibonakala iyona nto ibhetele kwiinkonzo zolawulo lwenkundla ezingasetyenziselwa oomasipala ukuphucula ukukhanya kunye nokuthatha inxaxheba kommi.
Le yinkonzo yommi, okwenziwa ngeplatifomu ingabonisa iingcebiso, iimfuno, iziphakamiso okanye ezinye izenzo ezisekelwe ilungelo labo lokuthatha inxaxheba kumasipala. Le mizekelo yemizekelo esenza sonke sikulungele ukuyisebenzisa:
Uluhlu apho ungathatha khona uluhlu lwee-bumps endleleni. Apha apha banokubambiswa ngombala ohlukileyo, abo bancinci, ama-culverts angenasigubungelo kunye nokubomvu abo ababulalayo ukuphula i-chrysma yesithuthi. Kuya kuba lunomdla, kuba kule mihla i-door echitha i-advertising ebonisa umsebenzi wayo ekulungiseni izitalato, abantu bangabika imiba yenyanga apho bangathatha khona ikhamera.
Uluhlu apho abamelwane bephula imithetho. O! Oku kuya kuba mnandi, umzekelo ukuba unokubeka indawo encinci ezindlini apho amaqela abanjwe ngaphandle kwexesha elinyanzeliswe ngumthetho wokuhlala kunye, izakhiwo ezichasene nemithetho yeendawo zokuhlala okanye abamelwane abahlala kwiindawo eziluhlaza.
Ndathi umphathi obeneminyaka embalwa edlulileyo: "Akukho nto ingcono kunokuba uxele ummelwane"
Kodwa ukongeza kweso sandi esibonakaliswe yimephu yezenzeko, kunokuba luncedo kakhulu ukuhlanganisa iziphakamiso zokuphucula umgangatho wobomi babemi. Ngokomzekelo, ukulungiswa bhajethi.
Ngaloo ndlela, esikhundleni sokuya kumaqela agxininisa (okuba yizopolitiko) ukufumanisa iiprojekthi, kunokwenzeka ukuba kuchaze ezinye iindidi, imigaqo-nkqubo yokubeka phambili kunye nabemi bakhupha i-intanethi.
Ekugqibeleni, ukugeleza kunikezelwa ngokuqhubekayo njengoko kuboniswe kwisigrafu: Kufunwa, kulungiswa, kulungelelaniswa, kubandakanywa kwisabelo-mali kwaye emva koko kulandelwa.
Kubaphathi bamagosa bavumela ukuba baqonde le mibuzo echaphazelekayo ngokuphathelele ummi kwaye inikeze indawo edibeneyo yolawulo lwazo zonke iinkcukacha zonxibelelwano kunye noluntu.
Kwimithetho emininzi kamasipala ibhajethi yokuthatha inxaxheba ilawulwa kwaye inikwe amandla; kwamanye amazwe kunyanzelekile. Yintoni engcono kunokukwazi ukuyijonga kwaye uyilawule kwiqonga lewebhu elidibeneyo kwi-Google Maps eyenzelwe le njongo.
I-Participació @ ifaka ezinye iinkalo ukwenzela ukuba umasipala akayi kutyalwa ixesha okanye izixhobo zokuphuhlisa. Phakathi kwabo unako:
Ukulawula imisebenzi yokufikelela. Abemi banokubhalisa, amabhodi ngamanzi, amabhodi omqeshi, njl.
Iziphakamiso zingaveliswa ngabemi.
Uyakwazi ukujonga iziphakamiso ngokuphathelele kwinkqubela phambili.
Ziyakwazi ukwahlulelwa kwaye zihlolwe nge-axis axia okanye phambili.
Inkqubo inokuthumela i-alamu ngeposi okanye nge-SMS xa iziphakamiso zitshintshe imeko okanye zilibazisekile ngokwemiqathango yazo.
Ngokuqinisekileyo uthatha inxaxheba @ yimiba efanelekileyo endiyibonayo ngokusetyenziswa komasipala. Ngaphandle kweCommunic @ ikhona, elingana nesixhobo esiqulunqisayo apho umasipala angazisa oko akwenzayo.
Kukulungele ukuthobela umthetho wokungafihli kunye noqhagamshelwano kummi.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iprojekthi yeProjekthi nge-AutoCAD Civil 3D 2011
Post Next Egeomates 3.0: Izigqibo SEOOkulandelayo "